Chelsea oo qorsheynaysa inay lacag badan ku soo qaadato Federico Chiesa… (Imise Milyan ayay doonayaan inay kula wareegaan?) – Gool FM
Chelsea oo qorsheynaysa inay lacag badan ku soo qaadato Federico Chiesa… (Imise Milyan ayay doonayaan inay kula wareegaan?)
Haaruun November 24, 2021
(London) 24 Nof 2021. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa la soo warinayaa inay isku diyaarinayso inay lacag dhan 100 milyan oo euro oo u dhiganta 84 milyan oo gini ku qarash-gareyso Weeraryahanka Juventus ee Federico Chiesa.
24-sano jirkaan ayaa u saftay Xulkiisa Talyaaniga intii lagu guda jiray tartankii Euro 2020, isagoo door hoggaamineed ka qaatay in dalkiisa uu ku guuleysto tartanka, halka xilli ciyaareedkii 2021-22 uu ahaa ciyaaryahan muhiim u ah Kooxda Marwada Duqda ah lagu naaneyso, isagoo dhaliyay saddex gool, loona diiwaan geliyay saddex caawin, 15 kulan oo uu saftay tartammada oo dhan.
Chiesa ayaa weli Juventus ugu jooga amaah ay kaga soo qaadatay Fiorentina, laakiin Old Lady ayaa doonayso inay heshiis joogto ah kula soo wareegto xagaaga dambe.
Warsidaha Talyaaniga ah ee Calciomercato ayaa warinaya in Chelsea ay si xoogan u xiisaynaysay weeraryahankan suuqii xagaaga, laakiin waa ay ku guuldarreysteen inay gacanta ku soo dhigaan.
Warbixintu waxa ay intaa ku daraysaa in in Blues ay weli xiiseyneyso xiddiga Naadiga Bianconeri ee Chiesa oo ay isku diyaarineyso inay hordhigto dalab 100 milyan oo Euro ah oo u dhiganta 84 milyan oo gini si ay u hesho adeeggiisa.
Weeraryahankan ayaa ciyaaray 80 daqiiqo kulankii ka dhacay garoonka Stamford Bridge ee kooxdiisa ay xalay guuldarro 4-0 kala soo kulantay naadiga reer London ee Chelsea.
Manchester United oo wada-xaajood kula jirta macallin horraan laga ceyriyay Barcelona... (Waa kuma macallinkaas?)
Macallinka ay filayaan Xiddigaha Manchester United inuu qaban doono shaqada Tababarennimo ee Kooxda oo shaaca laga qaaday